Halbeeg oo Haatuf u Beddeshey Maxamed Biixi si Loo Masabito Wasiirka Macdanta - Wargane News
Home Opinion Halbeeg oo Haatuf u Beddeshey Maxamed Biixi si Loo Masabito Wasiirka Macdanta
Intii uu dawalda kuu soo biiray iyo in ka badan ba Maxamed Yoonis bixii wuxuu ku taamayey inuu shaqada uu qaranku u igmaday ka fadhiisiyo wasiirka macdanta iyo Tamarta. Iyada oo laga yaabsan yahay halka uu kala qaaday ma daama u Xussen Cabdi Ducaale ku jiro wasiirada ugu kartida badan ee dawlada. Waxa se la soo tabinyaa in intaanu Maxamed Bixi Younis laga soo eryin shaqadiisa Darfoor uu balan ku qaaday inuu wasiirkaa ka eryo hawshiisa haduu dawlada ku soo biro. Taasoo uu u aaneeyey in reerkoodu ay heystaan wasaaradaha miisaanka leh dhamaantood ta ka maqanina ay tahay wasaarada macdanta iyo Tamarta.
Intaanu ka iman Darfoor waxa uu la tashaday wasiir ay isku bah yihiin iyo inan ka shaqeeya madaxtooyada. Dadkaasi waxay kula taliyeen in wasiirka macdantu uu maamuus badan ku leeyahay Madaxweynaha erigiisuna aanu hawl yaraanayn. Markii uu Dawlada ku soo biiray Maxamed Yoonis Bixi waxa markiiba shir u qabtay jilibkiisa waxa dawlada kaga jira kuna dardar gelyey inay wax kala qabtaan sidii loo eryi laha wasiirka macdanta iyo tamarta mudane Xuseen Cadi Ducaale. Markii ay tallo meel dhigteen waxay ku tashadeen in qadyad loo abuuro intaan madaxweynaha loo tegin. Markii ay taladu halkaa maraysey waxa ku soo biiray abwaanka been abuurka SL Yusuf Cabdi Gaboobe (mulkilaha Haatuf). Yusuf oo beryahan ba ay is haysteen wasaarada Macdanta iyo Tamarta oo raadinaya in bloog sahamin shidaal la siiyo. Wasaardu Yusuf Cabdi Gaboobe waxay u dirtay inuu soo cadeeyo sharkdaha uu hayo inuu soo ban dhigo. Yusuf waxba wuu soo ban dhigi kariwaayey waxaanu ku balan qaaday inuu sumcada wasiirka dhulka jiidi doono hadii aan degedeg loo siin bloog shidaal. Wasiirka khaarjiga oo ay isku bah yihiin mulkilaha Haatuf waxay ay isku raaceen in been abuur laxaad leh laga fuliyo wasaarada Macdanta. Maxamed Bixi yoonis waxa uu ugu balan qaaday inuu bixin doono wixi arinkaa dhaqaale looga baahan yahay. Waxa kale oo uu Yuusuf u ballan qaaday in uu adeejin doono dhallinyaro badan oo mihnadda saxaafadda ku shaqaysata oo uu caqliga kaga xaday gambooyin loo tuuro ama si yaabo kale oo ka sii foolxun, oo ay ka mid tahay inaan looba haysan inay leeyihiin caqli ku filan oo wax kala saari kara, sidaana loogu adeegto
Wasiirka Khaarjiga SL waxa uu geed dheer iyo mid gaaban ba u fuulay sidii uu Xuseen Cabdi ducaale uga caydhin lahaa jagadiisa. Isaga oo Maxamed cuskanaya wasiirka ay isku jilib yihiin iyo inanka ka shaqeeya madaxtooyada waxay toos ugu tageen Madaxweynaha oo uu been abuurkii uu soo sameeyey ula tegey, isaga oo leh haatufna gacanta aya iigu jirtaa. Madaxweynuhu waxa uu ka codsaday cadayn mususmaasaqa ay ku andcoonayaan inay u iftimiyaan. Markii uu dhegaystey isaga oo layaabsan. Wasiirka waxa afkiisa ka soo booddey in dadka neddeli kara wasiirka Macdanta uu ka mid yahay Alsakhraan Ina Cabdi Gaboobe. Madaxweynuhu aad ayuu ula yaabay, waana uu u sheegay inay xayndaabkii dawladnimo in badan weydaarteen. Albaabka boobeen markay arkeen inaanu Madaxweynuu ku qancin sheekadoodii.
Iyaga oo weji gabax ku jira ayey Marwada koobaad iyo Wasiirka madaxtooyda sheekadii madweynuhu ka aqbaliwaayey u bilaabin. Iyaga oo rajaynaya inay wax uga qabsoomaan. Iyaguna waxay ku yidhahdeen sheeko aan cadayn loo hayn wasiir laguma eryo karo. Markay halkaa maraysey ayey wasiirka ay isku bah yihiin iyo ninka madaxtooyada ka hawl gala gaadhigii ka boodeen. Maxamed Bixi Yoonis kula taliyeen inuu arinkan iska illaabo hadii kale ceeb uga dhici doono. Waxay kale oo kula taliyeen in shaqadiisan baylahda ah uu wax ka qabto, tan wasiirrada kale oo uu u hanqaltaagayomna iska daayo.
Haatuf iyo Maxamed Bixi yoonis ayaa ku heshiiyey inay dagaalki halkii ka sii wadaan. Wasiiriku wuxuu kula heshiiyey inuu qarashkiisa bixiyo balse inuu daaha dabadiisa ku jiro oo aan magaciisa la ogaan. Wasiirka khaarajigu wuxuu u soo uruurin jirey Haatuf wixii asraar ee dawladu malintaa ka hadlayso si uu Yusuf Cabd Gaboobe u bedelo oo been abuur ka sameeyo. Waxayaabo wasiirku ku kacay wax ka mid inuu wixii la xidhiidha wasaarada macdanta oo ay Haatuf xugufi ka daxayso uu u keeno Yusuf gaboobe.
Haatuf ayaa dawlada gebi ahaan iyo khasaatan qabiilka uu madaxweynuhu ka soo jeedo xajiimayn iyo cay aad uu faro badan maalin walba ku soo daabaca bogageeda iyo mareegta Haatuf. Waxay Gaddhay inuu Marwada koobaad iyo madaxweynaha maalin walba ku caayo jaridadiisa. Waxa isagana mashruuc uu ka digtay wasaardo badan oo ay ku jirto macdanta oo maalin walba uu sheegayo lacag ay jaxaasatay.
Markii uu dhibanayaashhi uu waxaba ku soo cadayn kari waayey, maxkamdii gobolkana cay iyo aflagaado kala daalay waa tii xabsiga loo taxaabay. Xataa hal shay oo marad fur u ah beentiisa qaawan ayaa la waayey, illayn waa wax sakhrad iyo maangurracan lagu qoraye. Alla beeni xoshood daranaa!
Markii mulkilihii Haatuf la xidhay wasiirka khaarjigu wuxuu ahaa kuwii ugu horreyey ee xabsiga ugu tegey isaga oo ka baqayaa inuu xog waramo oo sheego in Maxamed Bixi yoonis ka dambeeyo dawalad cayga kula jirey. Wasiirka khaarajigu wuxuu aad isugu dhibay sidii uu xabsiga uga siideyn lahaa.. Madaxweynahana kulan badan arintan Haatuf ayuu kala yeeshay, isaga oo ku andacoonaya hay’adihii xuquuq al insaanka ayaa inoo arka inaynu cabudhinayno xoryat al qawlka. Cid wal oo aan arkana lay way diinayo maxaad u xidheen Haatuf. Aniga oo saxaafada SL inbadan xogogaal u ahaa, waxan la hadlay gaal Nairobi jooga oo Hargeisa ka shaqayn jiray, waxan weydiiyey waxay ka qabaan Haatuf xidhitankiisa. Wuxu igu yidhi: ”Waan aqaana Yusuf anigaba baad ayuu i weydiisatay oo waa tuug afar kabood la ah, hay;ada ugu caansan SL xuquuq al insaank way noo sheegtay inuu arimo gaar ah ku delayo wasiirka”. Maxamed Bixi Yoonis isagoo takulaysanaya jilibkiisa ku jira wsiirada, shaqaalha madaxtooyada, hogaan dhaqameedka jilibkiisa wuxuu ku gulaystay inuu soo daayo Mulkilaha Haatuf. Hadana waxa uu aad ugu hawlanyahay sidii loogu fasixii lahaa jairiidada iyo mareegta Haatuf.
Qoraalkayga dambe waxan ka soo faaloon doonaa Wasiirka Khaarajiga oo markii Haatuf la xidhay la bahoobay nin ay ilmadeer yihiin oo ah mulkilaha Halbeeg kaas oo ah mareegta ugu aflgadada iyo cayda badan dincac dawalda. Mareegtan oo uu Maxamed Bixi u gudbiyey eemailo ay kala heleen wasiirka Macdanta iyo Tamarta. Kuwaas oo inadeerkii Maxamed Cabdilaahi Dirirdhabe (mulkilaha Halbeeg) iyo wasiirka Khaarajigu ay rabaan inay maandoriyeen oo been abuur ka sameeyaan wasiirka Macdanta iyo Tamarta. Mulkilha Halbeeg maandoorinta eemailda hore ayuu u samyey oo dagaal iyo garnaq badani ka dacay. Waxan kale oo aan ka hadli doonaa Wasiirka khaarajiga oo hadalo u socdaan xisbiga UCID oo uu doonayo inuu iska sharaxo jagada madaxweynaha, Jamal Cali Xussena lacagtiisa uu ku iibsaday xisbiga loo celiyo. Jamalna ka mid noqdo wasiirada dawalda Maxamed Biixi Yoonis dhisidoono haduu ku najaxo foodka. Ugugu dambayiin waxa du istaagi doona wax qabadkii wasiirka khaarajiga SL intuu hayey muhimadiisa iyo hada waxa uu ku suganyahay.